Garbahaarey, April 01.2013-----Iyadoo socdaal mudo labo maalin ah qaatay ay ku yimaadeen magaalada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo, wafdi uu hogaaminayo Ra'iisal Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, ayaa waxaa xukuumadu ay heshiis la saxiixatay ururka Ahlusunna Waljamaacah ee Koofur Galbeed Soomaaliya, waxaana sidoo kale, xukuumadu ay maamul KMG ah u dhistay gobolka Gedo, iyo degmada Garbahaarey.
Wasiirka Gaashaandhigga C/xakiin Maxamuud X. Faqi ayaa ugu horeyntii heshiis la saxiixday ururka Ahlusunna Waljamaaca ee Koofur Galbeed Soomaaliya, iyadoo heshiiskan uu goob joog ka ahaa Ra'iisal Wasaare Saacid.
Dhanka kale, Ra'iisal Wasaaraha Xukuumada Mudane Cabdi Faarax Shirdoon ayaa ka hor inta aanu ka dhoofin magaalada, waxa uu booqday aagaga hore ee ay ku sugan yihiin boqolaal ka tirsan ciidamada Dawladda, isaga oo u caddeeyey in wixii maanta ka dambeeya aysan jiri doonin labo ciidan oo kala duwan oo ku sugan gobolka Gedo, wuxuuna xusay in ciidamadu ay yihiin isku xaquuq, talis mid ahna ay hoostagaan kaasoo ah Taliska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Ra'iisal Wasaaraha ayaa kula dardaarmay ciidamadan inay sii wadaan xoreynta qeybaha weli ku jira gacanta kooxaha nabadiidka ah ee ka tirsan gobolka Gedo, wuxuuna xusay in loo dhameystiri doono wixii xaquuq ciidan ah.
Ugu dambeyntiina, wafdiga Ra'iisal Wasaaraha ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho, waxaana socdaaladan ay qeyb ka yihiin socdaalo uu ugu kuurgalayo R.wasaare Saacid xaaladda dhabta ah ee ka jirta gobolada iyo degaanada dalka.